Thola Ukufinyelela Okugcwele ngePro Trader Ubulungu ngamanani aphansi njengama- $ 65 ngenyanga
Thola Ukufinyelela Okugcwele kwimifudlana yethu yansuku zonke ye-LIVE nemibono yokuhweba enenzuzo ngaphakathi kwegumbi lethu le-Discord ne-Forex Trading.
IZISESHI ZOKUHWEBA ZONKE ZONKE
Ngaphakathi kwegumbi lethu lokuhweba le-Forex, uzothola ukufinyelela kubahlaziyi bezobuchwepheshe abaphezulu abazokunikeza isiqondiso sobuchwepheshe esivela emikhakheni ehlukene yokuhweba. Ukusakaza kwethu komhlaziyi we-Smart Money LIVE nsuku zonke ngesikhathi seseshini yaseNew York, kanye nezikhathi ze-2-4 ngesonto kuseshini yaseLondon. Joyina wethu Isiphakeli se-Discord ukuze ubone ishejuli ebuyekeziwe kakhulu yokusakaza bukhoma. Size sisingathe nokusakaza kwamahhala kwegumbi lokuphumula lamahhala emphakathini wethu we-Discord ngezikhathi ezithile, ngakho qiniseka ukuthi ukubhekile lokho!
Awunaso isikhathi sokuhambisana nezikhathi? Ayikho inkinga!
Zonke izikhathi zethu ezibukhoma ziyarekhodwa bese zenziwe zitholakalele abadayisi abaphuthelwe iseshini ebukhoma. Size sinikeze nezifinyezo zemakethe zansuku zonke zabahwebi abangenaso isikhathi sokujoyina izitimu ezibukhoma.
Unemibuzo ye-TA? Kuhle!
Siyithanda ngokuphelele imibuzo - ngoba lokhu kusho ukuthi uyafunda! Ungabuza abathengisi bethu noma yini ehlobene nokuhweba ngesikhathi semifudlana ebukhoma nasezindaweni zokuxoxa ze-Discord. Bahlale bejabule ukukusiza ngemizabalazo yakho yokuhweba, ukukunikeza impendulo kumashadi akho, futhi bakunikeze lokho abakubonayo ezimakethe.
Igumbi Lokuhweba Langaphambili yi-One-Stop-Shop yabadayisi bawo wonke amazinga wesipiliyoni.
Lapho imilingo yenzeka khona…
Yazi abahlaziyi bethu bezobuchwepheshe
Umthengisi Wezikhungo ufundisa Ukuhweba ngezikhungo izindlela zabadayisi abafuna ukuthola kangcono ukuvumelana ekuhwebeni kwabo. Ungathola amahora angaphezu kuka-100 + wamavidiyo wemfundo ye-Smart Money ngaphakathi kwegumbi lethu lokuhweba. Uma ungumhwebi obheke ukuthatha ukuhweba kwakho aye ezingeni elilandelayo, akukho Mentor ongcono ongafunda kuye kune-Institute Trader. I-IT iphinde yabonakala kaningi kwi-Trading Nut Podcast.
”Uma usufunde ukuthi ungalandelela kanjani izinyathelo ze-Smart Money emakethe ye-Forex, nokuthi intengo isetshenziswa kanjani, uzoba ukuguquguquka kwparadigm yokuthi ubheka kanjani Intengo, nokuthi uhweba kanjani ngezimakethe. ”
- Isikhungo Trader, Senior Technical Analyst
I-SD Trader ingeyethu Ukungezelela nokuDinga Umhwebi onesilinganiso Sengozi Yokuthola Umvuzo esingu-2.83 emibonweni yakhe yokuhweba (bheka lapha). Isebenzisa isitayela sokuhweba se-Supply and Demand, i-SD Trader iyakwazi ukugcina ubungozi buncane futhi umvuzo mkhulu. Amalungu angakwazi ukusizakala ngemibono yakhe yezohwebo kanye nokuhlaziywa kwezohwebo ngaphakathi kweGumbi Lokuhweba nakuDiscord.
Yiba yi-Pro Trader engaphansi kwekhofi ngosuku!
”Ngiyabonga Institute Trader. Ungumhwebi ohamba phambili kunabo bonke engake ngahlangana nabo, hhayi nje ngenxa yekhono lakho kodwa ngenxa yokuzinikela kwakho kubafundi bakho. ” - Ilungu leGumbi Lokuhweba (2020)
" Ukuthanda isipiliyoni nokuthi konke kucace kanjani. Ukuhlanganiswa okuhle kwethalente nokwabelana ngolwazi. Ilawulwa kahle. Njengomsebenzi. Qhubeka njalo bafo! ”- Ilungu leGumbi Lokuhweba (2020)
” Ifanele yonke isenti. Ngangimusha kahle ekuhwebeni ngenkathi ngijoyina igumbi labo lokuhweba. Ngisebenzisa isu lesenzo senani le-crypto futhi futhi lisebenza kahle kakhulu. Ngincoma kakhulu Forex Lens kunoma ngubani oqala nje ukuhweba. Kubonakala sengathi nabo banezinto eziningi ezithuthukile manje nabathengisi abaningi abahle ekuxabaneni okuhle. Nginikeza impumelelo yami enkulu kubo! ”- Ilungu leGumbi Lokuhweba (2020)
”Angikwazi ukukala Forex Lens phezulu ngokwanele! Insizakalo ekhanyayo, uhlala ukhona uma unemibuzo futhi uthola izeluleko zochwepheshe! Ukuhlaziywa okuhle kwezimakethe! Ngokuqinisekile unolwazi oluningi ngokulandela usizo nezeluleko. Ngingancoma kunoma ngubani ofuna ukuthola ulwazi oluthe xaxa futhi abe umhwebi ku-forex. ” - Ilungu leGumbi Lokuhweba (2021)
”Uma uhlela ukuthatha ukuhweba ngokungathi sína futhi uhwebe njengabachwepheshe, le sevisi ye-Forex Trading Room ingeyakho! ” - Ilungu leGumbi Lokuhweba (2019)
" Ngithole Forex Lens ezinyangeni ezimbalwa ezedlule futhi akungabazeki ukuthi insizakalo yesiginali ye-forex engcono engiyitholile. Ngizamile cishe eziyisishiyagalombili noma eziyisishiyagalolunye zazo futhi ngisebenzise cishe u- $ 2000 omuhle ngihlola izinsiza ezahlukahlukene. " -Ilungu leGumbi Lokuhweba (2018)
Izikhathi eziningi ezibukhoma usuku ngalunye ezihamba ezimakethe ngokuhweba (k) kosuku.
Imibono yezohwebo eyabiwe ngentengo yokungenela, Stop Loss, kanye neTake Profit target ngamashadi nomsebenzi wesikhathi.
Ukubuyiselwa kwevidiyo emfushane kwansuku zonke kwezikhathi ezibukhoma uma kungenzeka ukuthi ukuphuthele noma awunaso isikhathi sokubuka izikhathi ezigcwele.
Amavidiyo angaphezu kuka-100 + wokuqukethwe ahlelelwe ukukusiza ufunde izindlela zethu zokuhweba.
Yiba yi-Pro Trader namuhla
Joyina umphakathi wethu we-Discord